GLORIOUS PC Gaming Race တွေ ICT.com.mm မှာ ရပြီ။ ~ The ICT.com.mm Blog
GLORIOUS PC Gaming Race တွေ ICT.com.mm မှာ ရပြီ။
All the way from Texas, USA
Foradie-hard PC gamer!
GLORIOUS ဆိုတာကတော့ USA က lifestyle gaming hardware company တစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။ Gamer တွေရဲ့ battlestation အတွက် အရည်အသွေးအကောင်းဆုံး Gaming Gear တွေကို သင့်တင့်တဲ့စျေးနှုန်းနဲ့ ရောင်းချပေးနေတာပါ။
GLORIOUS ဟာ 2014 ကတည်းက PC Gaming hardware & accessories တွေကို elite-level performance, premium quality, high-end aesthetics ဖြစ်တဲ့အပြင် လူတိုင်း ဝယ်နိုင်မယ့်စျေးနဲ့ ရအောင် ထုတ်လုပ်ပေးနေတာ ဖြစ်ပါတယ်။
GLORIOUS ရဲ့ သမိုင်းကတော့ ၂၀၁၄ ခုနစ်လောက်က Gaming hardware တွေက စျေးအရမ်းကြီးနေတဲ့ ပြဿနာကို မြင်ခဲ့တဲ့ die-hard PC gamer တစ်ယောက်ကနေ အစပြုခဲ့တာပါ။ သူက ဒီပြဿနာကို ဖြေရှင်းလို့ရမယ်လို့ ယုံကြည်ခဲ့ပြီး community ရဲ့ support နဲ့အတူ $1,000 တည်းနဲ့ Glorious ကို မွေးဖွားခဲ့ပါတော့တယ်။ အဲ့အချိန်ကစပြီး pro-grade, high quality ဖြစ်တဲ့အပြင် စျေးသင့်တဲ့ gear တွေကို တောက်လျှောက်ထုတ်လုပ်လာခဲ့တာပါ။
For some gaming isahobby, for others it’saway of life.
တချို့တွေက ဝါသနာအရပဲ ဂိမ်းဆော့ပေမယ့် တချို့အတွက်ကတော့ ဂိမ်းက ဘ၀ပါပဲ။
ဒီလို Hard core gamer တွေအတွက် ”PERFECT PRODUCTS FOR A PERFECT BATTLESTATION” ဖြစ်စေဖို့ ရည်ရွယ်ထုတ်လုပ်ထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် တကယ့် Gamer စစ်စစ်တွေအတွက် die-hard PC gamer တစ်ယောက်ကနေ အစပြုတဲ့ GLORIOUS Gaming Hardware တွေကို ICT.com.mm က ဂုဏ်ယူစွာနဲ့ ရောင်းချပေးနေပြီ ဖြစ်ကြောင်း သတင်းကောင်းပါးလိုက်ပါရစေ။
HONEYCOMB SHELL နဲ့ ပေါ့ပါးသွက်လက်ပြီး သုံးရတာ သက်တောင့်သက်သာရှိမယ့် Glorious Model O Gaming mouse,
16.8 MILLION COLOR RGB BACKLIGHT ပါတဲ့ The GMMK Gaming keyboard,
Mouse ကို wireless mouse တစ်လုံးလို ခံစားရအောင် cable management လုပ်ပေးနိုင်မယ့် Glorious Mouse Bungee
စတဲ့ Gaming accessories တွေကို ရရှိနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
အခုပဲ အောက်က လင့်ခ်လေးတွေမှာ ကိုယ်လိုချင်တာကို စိတ်ကြိုက်ရွေးချယ်ပြီး အဆင်ပြေရင် တစ်ခါတည်း ဝယ်သွားလို့ရပါပြီ။
Shop here: http://bit.ly/3iVkgRz
Shop here: http://bit.ly/3ot0s9h
GMMK White Ice Edition – Compact (Pre-Built)
Shop here: http://bit.ly/3cmppAY
The GMMK – Compact USA – Pre-built
Shop here: http://bit.ly/3iTQk8o
Shop here: http://bit.ly/3pxTdOO
Shop here: http://bit.ly/3abNkAc
Shop here: http://bit.ly/2KWDIRc
Newer Google ဟာ offline ဘာသာပြန်လုပ်ဆောင်ချက်ကို Google Lens အတွက် Android မှာ ဖြန့်လိုက်ပါပြီ။
Older အလန်းစား ပုံတွေကို မှတ်တမ်းတင်နိုင်မယ့် နောက်ဆုံးပေါ် Xiaomi Mi 11 Flagship ဖုန်းတွေ ICT.com.mm မှာ ဝယ်ယူနိုင်တယ်နော်